Ihe Nlereanya # 1 Reason Na-ada na Nchọpụta Ngini Nchọpụta | Martech Zone
Ihe Nlereanya # 1 Reason Na-ada na Nchọgharị Ngini Nchọpụta
O buru na onwere otu ihe na akpasu m iwe ma abiara search engine njikarịcha, ọ bụ mgbe mmadụ na-akpali azụ megide mmepe ma ọ bụ saịtị na-agbanwe n'ihi na ha guo ihe ebe. Ọ bụrụ na saịtị gị na-eme nzuzu na ị nweghị ike melite ọkwa, ị ga-ebuli elu. Hapụ ọkwa saịtị saịtị n'ihi na ị guo ihe ebe enweta gị nsonaazụ ziri ezi nke ị nwere ugbu a.
Ihe # 1 mere ụlọ ọrụ jiri daa na njikarịcha njin ọchụchọ bụ n'ihi nke guo ihe ebe ngọpụ maka enweghị ọrụ. Kama itinye akụrụngwa na mmepe na ule, ụfọdụ ndị nrụpụta na-anọdụ ala n'ime ime ụlọ na-enyocha Google forums iji chebe echiche ya na ya ekwesịghị ịkwalite saịtị ahụ. Ọ bụ ihe nzuzu.
Nkọwa nke njikarịcha
Omume, usoro, ma ọ bụ usoro nke ịme ihe (dị ka imewe, usoro, ma ọ bụ mkpebi) zuru oke zuru oke, rụọ ọrụ, ma ọ bụ rụọ ọrụ dị ka o kwere mee; kpọmkwem: usoro mgbakọ na mwepụ (dị ka ịchọta oke nke ọrụ) metụtara na nke a. Ederede Merriam-Webster
Nchọgharị ọchụchọ enweghị iwu ma ọ bụ ndepụta maka ijide saịtị gị nke ọma. Ndị otu ahụ na Google enyela ụfọdụ usoro ntọala ị nwere ike ịme yana ụfọdụ ngwaọrụ iji nyochaa ihe ịga nke ọma gị. Ha ga agwa gị ka ijide n'aka na saịtị gị na-agagharị agagharị, gbaa mbọ hụ na ọ dị ọsọ ọsọ, gbaa mbọ hụ na ịgaghị egbochi engines ọchụchọ search ha na-enye ọtụtụ ihe ndị ọzọ ị nwere ike ime iji bulie ahụmịhe ọchụchọ ahụ - saịtị saịtị, njikọ canonical, meta nkọwa , alt tags, HTML Ọdịdị, ping, isiokwu ojiji, hierarchy, wdg…
Mana ha anaghị agwa gị ihe niile ị ga - eme, ha na - adụ gị ọdụ ka ị bulie saịtị gị. Ya mere, ọ dị gị ịnwale ojiji onyonyo, ojiji vidiyo, nhazi saịtị, igodo, wdg. Iji bulie, ọ chọrọ ka ị:
Iwu - nke ahụ pụtara na ọ dị gị mkpa ime ihe!
ule - nke ahụ pụtara na ị mepụtara usoro ma ọ bụ usoro iji nwalee mgbanwe.
Tụọ - nke ahụ pụtara na ị ga-atụle nsonaazụ nke mgbanwe ị na-eme na saịtị ahụ ka ị nwee ike ịkọ ihe na - arụ ọrụ na anaghị arụ ọrụ.
Guo ihe n'otu ebe
Enwere nsogbu ole na ole na guo ihe ebe ngọpụ maka arụ ọrụ:
The oge nke ndụmọdụ e nyere nwere ike ịbụ nke ochie na azịza njikarịcha njin ụlọ ọrụ ugbu a. Iji maa atụ, ị nwere ike ịgụ nnukwu edemede banyere ode akwụkwọ… mana Google anaghị akwado ya ọzọ.
The isi iyi nke ndụmọdụ nwere ike ịbụ kpamkpam nke onodu maka nsogbu ị na-abanye. Ikekwe, enyere ndụmọdụ ahụ maka saịtị ma ọ bụ saịtị, ma ọ bụ saịtị mpaghara, ma ọ bụ saịtị nwere nnukwu iji ekwentị… ndụmọdụ ahụ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ ma ọ bụ bụrụ ihe kacha mkpa maka saịtị gị
N'ihi ya… ebuli. Ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ na-ejigide usoro SEO, ọrụ dịịrị ya bụ iji hụ na ị naghị agagharị ya. Mana ha nwekwara ahụmịhe yabụ na ọ dịghị mkpa ka ndị otu gị pụọ guo ihe ebe.
The guo ihe ebe mgbaghara aghaghi iga. You'll ga-ahụ otu nde ihe kpatara na weebụ maka enweghị ọrụ, mana mgbe ihe ị mere anaghị arụ ọrụ, ị gaghị atụ anya nsonaazụ dị iche iche ruo mgbe ị gbanwere. Nke ahụ bụ igodo njikarịcha - gaa n'ihu nwalee ụzọ dị iche iche ka ị wee nwee ike ịchọpụta ihe kacha arụ ọrụ. Ajụ ihe ọ bụla belụsọ, dịka ọmụmaatụ, Google ewepụtala ozi doro anya gbasara ihe ị ga-eme ma ọ bụ ihe ị ga-eme. Dịka ọmụmaatụ, Google agwala gị ka ị ghara ịkwụ ụgwọ maka njikọ. Ya mere emela ya.
Ihe ọ bụla ọzọ bụ oghe maka njikarịcha. Kwụsị na-abịa na ngọpụ na-amalite optimizing gị na saịtị ugbu a!
Tags: Mee!Tụọguo ihe ebesearch engine njikarịchausoro ọchụchọusoro njikarịcha ọchụchọAule
Enweghị Hype Guide to Content Creation
5 Email Mobile Trend Need Kwesịrị Inttụle